Ihe Ntucha 9 kacha mma nke 2017 maka ndị nwe ụlọ - Ego
Ga-Ahụ Rentzụ Ụmụ Mma Kichin Na-Adịgide Adịgide Ejiji Agbamakwụkwọ Dị Ibu Ibu Nyocha Nyocha Ọrụ & Ego Olee Otú Iji
Mbepu ego iri nke ndi nwe ulo obula kwesiri ima
Nnukwu ego nke iwepụ ego nwere ike ịnwe ego kachasị nwee ego n'etiti anyị ịkọ isi anyị na-abịa oge ụtụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ, ị ga-echekwa isi, Isi buckage ma oburu na ima ihe i tozuru. Anyị nyochara ya Lisa Greene-Lewis , CPA na TurboTax Ọkachamara Taxtụ, maka ebe niile dị mkpa ị kwesịrị ịdị na-akwado mmesapụ aka nke Uncle Sam na ụlọ n'ihu.
Njikọ: Ihe 4 Imara Banyere estụ Isi Gị Ọ bụrụ na Inwere Nwa n’afọ a
Nkwụnye ortgwọ ortgwọ
The biggie: You nwere ike iwepu ego ole ị kwụrụ na nnyefe gị. Ọ bụrụ n ’ị zụrụ ụlọ gị n’afọ gara aga, ịkwesịrị ịnata akwụkwọ a na-akpọ 10dị 1098 n’aka onye binyere gị ego nke gụnyere ego ọmụrụ nwa a kwụrụ, yana isi ihe ndị ị kwụrụ, ka i wee nwee ike ịbelata nbelata ego gị maka nkwụghachi ka ukwuu.
Nke a na-enwe olile anya na ị gaghị azọrọ nke a n'ezie, nke ga-abụ nsonaazụ nke ihe mberede, na-atụghị anya ya ma ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe (dị ka mmebi ihe onwunwe n'ihi afọ ajọ ajọ ifufe nke afọ gara aga, dịka ọmụmaatụ). Ọ bụrụ n ’ọghọm gị mejupụtara ihe karịrị pasent 10 nke ego gị, i nwere ike iwepu ihe ọ bụla mkpuchi gị na-anaghị ekpuchi.
Ọ bụrụ na ịmeela ndozi anyanwụ ọ bụla n'oge na-adịbeghị anya (lee: ike ogwe), ị tozuru oke maka otuto nke 30 pasent nke ngụkọta ego, gụnyere ntinye, na-enweghị oke oke. Rịba ama na ebe obibi ikike ịrụ ọrụ nke ọma nke ihe onwunwe ga-adaba na afọ n'okpuru koodu ụtụ ọhụrụ, yabụ echela ogologo oge ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị uche na atụmanya ahụ. (Ebe E Si Nweta na-agbada ruo 26 pasent maka afọ ụtụ isi 2020; 22 pasent maka afọ ụtụ 2021, wee mechaaỌnwa Iri na Abụọ 31, 2021.)
Nchekwa akụkọ ihe mere eme
Zụta otu agadi fixer-elu? Nwere ike iru eru maka nwepu. Ọ bụ ezie na akwụmụgwọ nchekwa akụkọ ihe mere eme metụtara ọkachasị na 'iwepụta ihe na-akpata' (dị ka ụlọ azụmaahịa), ụfọdụ steeti nwere ụgwọ ụtụ isi nchekwa akụkọ ihe mere eme maka ụlọ ndị nwe ha. Iji ruo eru maka ha, a ga-edebanye ụlọ gị na National Register of Places Historic Places, a ga-enyocha ọrụ ọ bụla emere iji hụ na ọ ga-egbo mkpa nchekwa.
Ego mgbazinye na ụlọ Secondary
N'adịghị ka ebe obibi mbụ gị (nke a ọ bụghị gụọ ego mgbazinye dị ka ego na-atụ ụtụ isi), ọ bụrụ na ịgbazite ụlọ nke abụọ gị maka ihe karịrị izu abụọ n'afọ, ị ga-ekpesa ya na nloghachi gị. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnweta nkwụsịtụ n'ụdị mmezi mmefu metụtara mmefu mgbazinye: nke pụtara ihe dị ka ngwa, ndozi na arịa ụlọ.
Isi ego Mwepu
Imirikiti ndị na-atụ ụtụ isi adịghị mkpa ịkwụ ụtụ isi na uru ire ụlọ ha, na-ekele nwoke a. Isi okwu: Ọ bụrụ na ị nwere ma biri n'ụlọ obibi gị maka afọ abụọ n'ime afọ ise tupu ya ere, ị nwere ike irite uru $ 250,000 mgbe ị na-ere ma ghara ịnwe ya na ụtụ isi gị. Di na nwunye, inwere ike iwepu uru ruru $ 500,000. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị tinyere ihe karịrị $ 250,000 (na nke gị) ma ọ bụ $ 500,000 (dị ka di na nwunye), a ga-atụ ụtụ gị.
Officelọ Ọrụ .lọ
Ọ bụrụ n 'iji iwu kwado ụlọ ọrụ ụlọ gị oge niile (oge niile na naanị, kwa ntuziaka IRS ), I nwere ike were n'ụlọ ọrụ mwepu maka a pasent nke gị nnyefe mmasị, mkpuchi na mmezi-nke dabeere na pasent nke gị square footage eji maka azụmahịa gị.
Ihe ncheta: Ọ bụrụ n’itinye ego gị na ego gị, i nwere ike ide ego niile a tụrụ n’ụlọ gị. Ma gbagoo: Malite Osote afọ iwepu ego a ga - abụ naanị $ 10,000 (kwa koodu ụtụ ọhụrụ).
Na-agagharị akwụ ụgwọ
Zụtara ụlọ ọhụrụ gị n'ihi ọrụ? Ọ bụrụ na ị mezuo njirisi (aka ị na-arụ ọrụ oge niile ma ọ dịkarịa ala izu 39 n'ime ọnwa iri na abụọ mbụ mgbe ị kwagara, ọhụụ ọhụrụ gị dịkarịa ala 50 kilomita dị anya site na ụlọ ochie gị karịa ebe ọrụ gị ochie), ị nwere ike ị nweta ụgwọ mmegharị gị-ihe niile sitere na ndị na - ebugharị na igbe nchekwa.
Njikọ: Nwere Ike Writde Akwụkwọ Mkpụrụ Obi Gị (Gụnyere 5 Ndị Isi Nbelata Othertụ Isi I Nwere Ike Afọ a)
Categories Ejiji Agbamakwụkwọ Akpụkpọ Anụ Nyocha Nyocha
ezinụlọ ihe nkiri na-ekiri
Ntuziaka ntutu isi ntutu n'ụlọ
ọgwụgwọ ụlọ maka ntutu ọhụrụ
tii kacha mma n'ụwa